Lomano- Mada 25 m: hanana solontena avokoa ny ligy rehetra | NewsMada
Efa vonona tanteraka ny federasiona malagasy ny lomano. Hanomboka ny faran’ity herinandro ity, etsy amin’ny dobo filomanosan’ny Esca Antanimena ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, taranja lomano, ho an’ny dobo 25 metatra.
Hanana solontena avokoa ny ligim-paritra rehetra manerana ny Nosy, mandritra ity fifaninanana nasionaly ho an’ny 25 metatra ity. Izany hoe mandray anjara avokoa ireo ligy miisa 7 mivondrona eo anivon’ny FMN (Analamanga, Atsinanana, Boeny, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany ary Alaotra Mangoro). Raha ny fanazavan’ny komisiona teknika, manodidina ny 350 eo ireo mpilomano hifaninana hahitana ny sokajy rehetra. Niakatra io isa io raha oharina tamin’ny fifaninanam-pirenena farany natao tany Mahajanga, nahitana mpilomano miisa 297. Misy ireo ligim-paritra sasany, hahitana klioba mihoatra ny iray, ho avy handray anjara, toy ny ligin’Atsinanana, misy ny klioban’ny CNSE (Club de Natation du Sud Est) sy ny Klioban’ny CRJS. Maro amin’ireo atleta handray anjara ny hanandrana haka “record national” ary samy manantena izany daholo ny mpankafy ny taranja lomano.
Hampiasaina ireo fitaovana vaovao
Hampiavaka tanteraka ny fifaninanana amin’ity faran’ny herinandro ity ny fampiasana ireo fitaovana vaovao vao tonga tamin’iny volana janoary iny. Efa nisy ny fanandramana ara-teknika nandritra ny herinandro vitsivitsy ireo fitaovana ireo ary tsy hanano sarotra intsony ny fampiasana izany ao anatin’ny fifaninanana. Isan’ny hampiasaina ohatra, ireo “plaques” manajanona ny fe-potoana hatao ao anaty rano. Avo lenta tanteraka, araka izany, ny fifaninanana eo anivon’ny FMN manomboka izao, noho ny fisian’ireto fitaovana manaraka ny teknolojia ireto.